जनवरी 11, 1997 रूस मा मनाउन रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क को दिन। Barguzin - यो दिन मा, गत शताब्दीको (1916 मा) सिर्जना रूसी राज्य रिजर्व पहिलो। यो पोखरी Baikal को किनारमा मा स्थित छ। Zabaikalye पनि स्थित रिजर्व इर्कुत्स्क क्षेत्रमा। यस क्षेत्रमा सुरक्षित क्षेत्रमा धनी छ। क्षेत्र मा दुई आरक्षित Pribaikalskiy राष्ट्रिय पार्क र धेरै प्रकृति रिजर्व छ।
को इर्कुत्स्क क्षेत्र को सुविधाहरू
यो पूर्वी साइबेरिया को सबै भन्दा ठूलो क्षेत्रहरु मध्ये एक छ। रूसी क्षेत्रमा लगभग 5% को एक क्षेत्र। को भारी हदसम्म परिदृश्य र प्रकृति को विविधता बताउँछन्। एउटा ठूलो भाग taiga जंगल, plateaus, steppe नदी घाटिहरुमा को remnants कब्जा गरिएको छ। तर मुख्य को इर्कुत्स्क क्षेत्र को आकर्षण - ताल Baikal। उहाँलाई धन्यवाद, त्यहाँ व्यापक पर्यटन विकास।
Baikal किनभने अद्वितीय प्राकृतिक परिदृश्य, सफा पानी र वनस्पति र जीव को एक विशाल विविधता को एक विश्व विरासत साइट रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
एक आरक्षित के हो?
इर्कुत्स्क क्षेत्र यूनेस्को समावेश लेक Baikal को बेसिन, मा स्थित छ विश्व सम्पदा साइटहरू। तसर्थ, संघीय महत्त्व को एक संरक्षित क्षेत्र रूपमा भन्दा। सूची इर्कुत्स्क क्षेत्र एउटा सानो बोक्छ, तर आफ्नो मूल्य उच्च छ। को आरक्षित यसको मूल रूप मा प्राकृतिक जटिल संरक्षण गर्न स्थापित भएको थियो। यहाँ पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको शिकार र कुनै पनि आर्थिक गतिविधि।
पहिलो रिजर्व - barguzin - माथि 1916 मा रूस मा, उल्लेख रूपमा सिर्जना गरिएको थियो। 80 वर्ष मा देखा यो इर्कुत्स्क क्षेत्र सुरक्षित गर्न आ। तिनीहरूले Baikal तटरेखा को एक ठूलो क्षेत्र कवर र अनुपम वनस्पतिहरूको र जीव संरक्षण गर्न सिर्जना गरियो।
को इर्कुत्स्क क्षेत्र को रिजर्व: सूची
त्यहाँ अवशेष steppe, taiga सुन्दर जंगल, ताल, पहाड दायरा, पुरातन paleo-ज्वालामुखी, झरने, घाटीहरू को टुकडे छन्। अनुपम प्राकृतिक परिदृश्य र प्रकृति रिजर्व रक्षा गर्न इर्कुत्स्क क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको छ। उनि आफ्नो प्राकृतिक अवस्थामा लेक Baikal तट संरक्षण गर्न मदत देखि, आफ्नो नाम कुनै पनि स्थानीय थाह सूची। वनस्पति र जीव को धेरै प्रतिनिधिहरु मर्न थाले कारण सक्रिय आर्थिक गतिविधि र वन फँडानी कहिले, यो बीसौँ शताब्दीका, को अन्त गर्न विशेष सान्दर्भिक थियो।
जो इर्कुत्स्क क्षेत्रमा रिजर्व छ?
Vitimsky प्रकृति रिजर्व 1982 मा स्थापित भएको थियो। को ट्रांस-Baikal को पूर्वोत्तर भाग मा स्थित। आफ्नो उपस्थिति को उद्देश्य एक bighorn भेडा, पशु को सेबल, दुर्लभ प्रजाति, एक पहाड ताल Oron एक अद्वितीय परिदृश्य रक्षा गर्न थियो। यहाँ, मेपल बढ्न त्यहाँ Pines, Cedars र FIR छन्। देखेको Vitimsky आरक्षित मात्र साथ3पैदल यात्रा ट्रेल्स द्वारा सम्भव छ नदी Vitim र पोखरी Oron।
Baikal-Lensky प्रकृति रिजर्व 1986 मा सिर्जना गरिएको थियो। यो पोखरी Baikal को पश्चिमी तट मा Baikal हिमालहरूको दक्षिणी भाग मा स्थित छ। यहाँ taiga जंगल, 1.5 मिलियन वर्ष को अवशेष steppe2paleovolcano उमेर संरक्षित छन्। को आरक्षित खैरो भालू र अन्य taiga जनावर को एक विशाल संख्या छ। जस्तै osprey, कालो सारस रूपमा दुर्लभ प्रजाति यहाँ पाइन्छन्, चील, सुनको चीललाई, PEREGRINE बाज र अरूलाई भेट्यो। पाइन, मेपल र देवदार रूखहरू प्लान्ट प्रसार, lichens, mosses र Fungi धेरै। endangered बिरुवाहरु को 47 प्रजाति त्यहाँ गार्ड सहित छ।
यो एक अद्वितीय प्राकृतिक साइटहरु संग एक ठूलो क्षेत्र हो। त्यहाँ शानदार दृश्यहरु को पहिचान संरक्षण मनोरञ्जन र पर्यटन को लागि सबै अवस्था, हो र वनस्पति र जीव हानी छैन। सीमित र कहिलेकाहीं पूर्ण मानव आर्थिक गतिविधिहरु प्रतिबन्ध लगाइएको, तर स्थानीय जनसंख्या आवश्यकताहरूको कृषि प्रयोजनका लागि प्रकृति प्रयोग गर्न। रिजर्व नभई राष्ट्रिय निकुञ्ज इलाका गर्न पर्यटकहरु प्रवेश गर्न अनुमति दिएको छ। त्यहाँ पार्किङ र पैदल यात्रा ट्रेल्स संग सुसज्जित छन्।
पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज अमेरिकामा 1872 मा स्थापित भएको थियो - एलोस्टोन छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो - पूर्वोत्तर ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज 950 भन्दा बढी हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र छ। र रूस मा, सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज को इर्कुत्स्क क्षेत्र मा स्थित छ।
Pribaikalskiy राष्ट्रिय निकुञ्ज
संघीय महत्त्व को यो सुरक्षित क्षेत्र। लेक Baikal को पश्चिमी किनारमा असामान्य प्राकृतिक संसारको रक्षा गर्न स्थापित। बारेमा 470 मी - यो आफ्नो तट को लम्बाइ लगभग एक चौथाई समावेश छ। Pribaikalskiy राष्ट्रिय निकुञ्ज - क्षेत्र सबैभन्दा भ्रमण पर्यटक क्षेत्र छ। को इर्कुत्स्क क्षेत्रमा सबै प्रकृति रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क को यो भन्दा बोट र जनावरहरूको दुर्लभ प्रजाति मा धनी छ। पार्क 400 भन्दा बढी हेक्टरमा छ - रूस मा सबै भन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र हो।3बाट 20 मी, समुद्री तट रिज Tazheranskaya steppe बेसिन ठूलो र आंशिक गर्न - यो एक संकीर्ण तट समावेश Olkhon।
सबै रिजर्व र NAT। पार्क इर्कुत्स्क क्षेत्र वनस्पति र जीव को एक धनी किसिम द्वारा विशेषता, केही प्रजाति जो कहीं फेला, र प्रकृति को भव्य दृश्य। तर यो राष्ट्रिय निकुञ्ज सबै भन्दा पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। यहाँ ÃŸÃ बे र Sandy, को Primorsky Ridge, relic steppes र नुन पोखरी को राजसी भीर छन्। को ANGARA स्रोत साइबेरिया wintering जलपक्षी मा सबै भन्दा ठूलो छ।
रिजर्व के हुन्?
केही क्षेत्रमा जसमा सुरक्षा अन्तर्गत वा विशेष प्राकृतिक साइटहरु मात्र प्रकारको अभयारण्य भनिन्छ। तिनीहरूले यस्तो शिकार रूपमा मात्र केही मानव गतिविधिहरु, निषेधित छन्। अब रूस मा त्यहाँ संघीय महत्व 70 प्रकृति रिजर्व, को इर्कुत्स्क क्षेत्रमा अवस्थित छन्2जो छन्। यी सुरक्षित क्षेत्रमा सीमितता को एक विधान बिना बनाईएको हो, र स्थानीय महत्व रिजर्व केही वा कम दशक अवस्थित सक्छ। तिनीहरूलाई को भन्दा धेरै दुर्लभ वा लोपुन्मुख जाती बचत गर्न डिजाइन, तर त्यहाँ एक बोट वा जनावरको सुरक्षाका लागि डिजाइन गर्दै छन् ती हुन्।
रिजर्व र इर्कुत्स्क क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य रूपमा लेक Baikal असामान्य प्रकृति संरक्षण गर्न स्थापित। Krasny Yar र Tofalar र रिजर्व Magdansky, Chaysky, Kireysky, Irkut, Boyskie marshes र अरूलाई - अहिले यो क्षेत्र संघीय महत्व2आरक्षित स्थित छ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध खेल रिजर्व
को इर्कुत्स्क क्षेत्र 16 प्रकृति रिजर्व सबै। तिनीहरूमध्ये -2संघीय र स्थानीय 3, 8 जटिल अभयारण्य र3प्रजाति। यी केही राम्रो ठूलो र प्रसिद्ध।
Tofalar संघीय आरक्षित को बीसौँ शताब्दीको 70s मा सिर्जना गरिएको थियो। यसलाई पूर्व Sayan रिजर्व को प्राकृतिक परिदृश्य समावेश, उदाहरणका लागि, Kosurgasheva हिमनदी।
Krasny Yar - संघीय महत्व एक जटिल प्रकृति आरक्षित, जस्तै आरक्षित गर्न सकेसम्म बन्द गर्नुहोस्। यो सेबल, खैरो भालु, musk मृग, Bittern, roe मृग र अन्य साधारण प्रजाति घर छ। सुरक्षित कालो सारस र खैरो क्रेन।
Irkut आरक्षित 30 हजार। हा को एक क्षेत्र र जंगली बँदेल को वासस्थानमा रक्षा गर्न सिर्जना गरिएको थियो।
Boyskie आरक्षित दलदल नदी केटा साथ सिर्जना र जंगली hoofed जनावर र नेस्टिङ चरा को habitats राख्छ।
Magdansky रिजर्व Magda र Ilga नदी को बेसिन मा स्थित छ। बहुमूल्य माछा प्रजाति र नेस्टिङ चरा को मैदान spawning, वन्यजन्तु वासस्थानमा रक्षा गर्न स्थापित।
को इर्कुत्स्क क्षेत्र को क्षेत्र मा, पर्यावरण ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक प्राकृतिक वस्तुहरु को एक सेट छ। तिनीहरूले प्राकृतिक स्मारक घोषित गरिएको छ। तिनीहरू यहाँ 77 वस्तुहरू छन्। यी को, भूवैज्ञानिक प्रकृति स्मारक - रक विश्व, हिमनदी सनी, शीतकालीन परी गुफा, आर्क केप, जादूगर रक, रक Chayachy, गुफाहरु र अधिक। प्रकृति को धेरै पानी स्मारक: को Karst वसन्त, ताल हृदय Udi नदी, झरने र पानीका मुहानहरू को Okuynaki स्रोत थ्रेसहोल्ड।
जटिल परिदृश्य स्मारक shamanistic petroglyphs, हान नदी, Sandy बे, Kaiskiy Grove, पुरातन गुफाहरु Tushamskie पाइन वन र अरूबाट petroglyphs मा आकारको ढुङ्गा हो। प्रकृति को स्मारक धेरै दुर्लभ बिरुवाहरु हो: पानी कटुस, इर्कुत्स्क लिली, स्प्रूस र अन्य relic।
राष्ट्रिय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य र इर्कुत्स्क क्षेत्र को प्रकृति रिजर्व किनभने लेक Baikal को विशिष्टताको को पर्यटकहरु को ध्यान आकर्षित। प्रकृति को सुरम्य दृश्य, स्वच्छ पानी, ताजा हावा र बिरुवाहरु र जनावरहरूको दुर्लभ प्रजाति को उपस्थिति - यो क्षेत्र भ्रमण पछि पर्यटकहरु को स्मृति मा सञ्चय कुरा हो। बल्कि कठोर जलवायु तापनि न्यानो दिन र चिसो पानी ponds एउटा सानो राशि, पर्यटकहरु यो स्थान प्रेम। को झरने, ज्वालामुखियों को सौन्दर्य आनन्द र पुरातन relic steppe प्रकृति को हरेक प्रेमी आवश्यक हेर्नुहोस्।
रूसी तारा स्वाद। सामाजिक जीवन र शिष्टाचार को नियम
क्यानाडा मा यूक्रेनियन: शिक्षा, रोजगारी र जीवन
स्कोर र सूची को: को happiest देश छ
स्रोत र माटो दूषण को कारण। माटो दूषण को प्रकार र वातावरण लागि परिणाम
प्रयोगको लागि निर्देशन: लागि वयस्क खोकी ड्राई
यो श्रृंखला "को Unequal विवाह": अभिनेता प्ले प्रेम कथा
Lipofreniya - यो के हो? कसरी सामना गर्ने?
उत्पादन जीवन चक्र र यसको चरणमा
Spazmalgon: प्रयोगको लागि निर्देशनहरू
जहाँ क्रास्नायार्स्क पर्यटकहरु जाने: शहर को रोचक ठाँउहरु को सूची
एक्वैरियम संयंत्र "vallisneria सर्पिल": विवरण, प्रजनन, रखरखाव र हेरविचार
कसरी dildo चयन गर्न - विशेषताहरु, प्रकार र सिफारिसहरू